BUDDHIST TERMS' Dictionary: KHANDHAKA DUTIES - ခန္ဓက၀တ္တ
KHANDHAKA DUTIES - ခန္ဓက၀တ္တ
KHANDHAKA DUTIES Khandhakavatta
ခန္ဓက၀တ္တ - ခန္ဓကကျင့်ဝတ်။
၀ိနယပိဋက မဟာဝဂ္ဂကျမ်းနှင့် စူဠ၀ဂ္ဂကျမ်းတို့၌ ပါရှိသော ရဟန်းသာမဏေတို့ ကျင့်သုံးလိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ခန္ဓက၀တ်ဟုခေါ်သည်။
(၁) ဧည့်သည်ရဟန်းကျင့်ရမည့် အာဂန္တုက၀တ်၊ ဧည့်သည် (အာဂန္တုက) ရဟန်းများ အာရာမ်အတွင်းသို့ မ၀င်မီ ဖိနပ်ချွတ်ရခြင်း၊
(၂) ကျောင်းနေရဟန်းကျင့်ရမည့် အာဝါသိက၀တ်၊ ဧည့်သည်ရဟန်းကိုမြင်လျှင် ခရီးဦးကြိုပြုခြင်း၊ သပိတ်သင်္ကန်းကို လှမ်းယူခြင်း၊ ဧည့်သည်ရဟန်းကြီးကို ရှိခိုးခြင်း၊ ခြေဆေးရေ ခြေဆေးအင်ပျဉ် စသည်တို့ကို အနီး၌ထားခြင်းစသည်၊
(၃) ခရီးသွားရဟန်းကျင့်ရမည့် ဂမိက၀တ်၊ ခရီးထွက်ခွာမည့် ရဟန်းသည် ကျောင်းတံခါးမ လေသာတံခါးတို့ကို ပိတ်ခြင်း၊ အတူနေရဟန်းသာမဏေတို့ကို ပန်ကြားခြင်း စသည်၊
(၄) အနုမောဒနာပြုရာတွင် ကျင့်ရမည့် အနုမောဒနာဝတ်၊
(၅) ဆွမ်းစားဇရပ်၌ ကျင့်ရမည့် ဘတ္တဂ္ဂ၀တ်၊
(၆) ဆွမ်းခံရာ၌ ကျင့်ရမည့် ပိဏ္ဍစာရိက၀တ်၊
(၇) တောကျောင်းနေရဟန်း ကျင့်ရမည့် အာရညိက၀တ်၊ သောက်ရေ သုံးရေ တည်ထားခြင်း၊ မီးပွတ်ခုံ၊ မီးပွတ်ကျည် တောင်ဝှေးထားခြင်း၊ အရပ်လေးမျက်နှာ နက္ခတ်တာရာ မှတ်သားထားခြင်းစသည်၊
(၈) ကျောင်းအိပ်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျင့်ရမည့် သေနာသန၀တ်၊ ညောင်စောင်း အင်းပျဉ် အိပ်ရာနေရာတို့ကို သုတ်သင်သန့်ရှင်းခြင်း၊ နေလှန်းပေးခြင်း၊ ပရိဝုဏ် ရေချိုးအိမ် ၀စ္စကုဋီတို့ကို တံမြက်လှည်းခြင်း စသည်၊
(၉) ဇရုံးအိမ် (ရေချိုးခန်း)၌ ကျင့်ရမည့် ဇန္တာဃရ၀တ်၊
(၁၀) ၀စ္စကုဋိ (အိမ်သာ)၌ ကျင့်ရမည့် ၀စ္စကုဋိဝတ်၊
(၁၁) ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ၌ ကျင့်ရမည့် ဥပဇ္ဈာယ၀တ်၊
(၁၂) အတူနေတပည့်၌ ကျင့်ရမည့် သဒ္ဓိဝိဟာရိက၀တ်၊
(၁၃) နိဿရည်းဆရာ၌ ကျင့်ရမည့် အာစရိယ၀တ်၊ နံနက်စောစောထ၍ ကိုယ်ဝတ်ကို လက်ကန်တော့တင်ကာ မျက်နှာသစ်ရေ ဒန်ပူကပ်ခြင်း၊ ယာဂုဆွမ်းကပ်ခြင်း၊ သပိတ်ခွက်ဆေးခြင်း၊ ကျောင်းအိပ်နေရာတို့ကို သုတ်သင်ခြင်း၊ နေလှန်းခြင်း၊ တံမြက်လှည်းခြင်း၊ နေရာခင်းခြင်း စသည်၊
(၁၄) အနီးနေတပည့်၌ ကျင့်ရမည့် အန္တေ၀ါသိက၀တ် - ဟူ၍ ၁၄-ပါးရှိ၏။
Duties prescribed for bhikkhus and novices
Duties of bhikkhus and novices stated in the Mahᾱvagga and Cῡlavagga of the Vinaya Pitaka are known as Khandhaka Duties. They are:
(1) duty asaguest (in which the visiting bhikkhu is required to take off his footware, etc.), ᾱgantukavatta;
(2) duty asahost (in which, among other things, the host must receiveavisiting bhikkhu warmly, take care of his bowl and robe, and, should the visitor be senior to him in entering the Order, make obeisance and provide him with water and other necessities for washing his feet), ᾱvᾱsikavatta;
(3) duty before travelling (in whichabhikkhus is required to close the doors and windows of the monastery, ask fellow residents permission to travel, etc.), gamikavatta;
(4) duty to say words of appreciation for the good deeds done, anumodanᾱvatta;
(5) duties inarefectory, battaggavatta;
(6) duties relating to going on an alms-round, piṇdᾱcᾱrikavatta;
(7) duties inasylvan monastery, providing water for drinking, providing means of lightingafire, providingaleaning staff, nothing the orientation of the place with reference to the stars; araññikavatta;
(8) duties concerning living quarters (in which he is) required to air bedding, sweep and clean the compound, bathroom and lavatory, senᾱsanavatta;
(9) duties concerning the bathroom, jantᾱgharavatta;
(10) duty concerning the latrine (toilet), vaccakuṭivatta;
(11) duty to attend on one’s preceptor, uppajjhᾱyavatta;
(12) duty ofamentor towards bhikkhus and novices who depend on him, saddhivihᾱrikavatta;
(see also DISCIPLE: TEACHER).
(13) duties towards one’s mentors (in whichadisciple is required to get up early and attend on his mentors, respectfully offering toothbrush and water for washing, prepare and serve breakfast, clean and tidy up the sleeping quarters, give the bedding an airing etc.), acariyavatta; and
(14) duty ofateacher towards one’s close disciple, antevᾱsikavatta.